iPhone X သည်ဘက်ထရီသက်တမ်းစမ်းသပ်မှုတွင် iPhone အသစ်များကိုကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့သည် အိုင်ဖုန်းသတင်း
အိုင်ဖုန်း X သည်ဘက်ထရီသက်တမ်းစမ်းသပ်မှုတွင် iPhone အသစ်များထက်သာလွန်သည်
Ignacio Sala | | အတော်ကြာ
စျေးကွက်ရှိစမတ်ဖုန်းအသစ်များသည်ယခင်မော်ဒယ်များနှင့်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည့်ဆိပ်ကမ်းများနှင့်အတူစမ်းသပ်မှုအသစ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်။ သုံးစွဲသူများစွာအတွက်အရေးကြီးဆုံးကဏ္ of တစ်ခုမှာ၎င်းဖြစ်သည် ဘက်ထရီစွမ်းရည်မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းကကျွန်ုပ်တို့၌မြင်တွေ့ခဲ့ရသောစွမ်းရည်သည် iPhone တွင်အနည်းငယ်သာတိုးတက်ခဲ့သည်။
Cupertino မှလူငယ်များသည်သူတို့၏ပရိုဆက်ဆာများ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုမြှင့်တင်ရန်အာရုံစိုက်နေကြသည် စားသုံးမှုတတ်နိုင်သမျှတင်းကျပ်စွာဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကဈေးကွက်သို့ ၀ င်ရောက်ခဲ့သည့် iPhone X သည်၎င်း၏ဘက်ထရီစွမ်းရည်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းအားဖြင့်ကောင်းမွန်သောကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုပေးခဲ့သည် ယခုနှစ်အတွက် iPhone X မှပေးသောနံပါတ်များသည်မျိုးဆက်သစ်များထက်ကျော်လွန်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။ ကောင်းပြီ။
လွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်က iPhone X ကိုစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည် iPhone XS နှင့် iPhone XS Max တို့ထက်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပိုမိုပေးသည်။ အနည်းဆုံးတော့ Tom ၏လမ်းညွှန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ဖတ်ရသောနှိုင်းယှဉ်မှုကထင်ဟပ်သည်။ စျေးကွက်ရှိအဓိကအဆင့်မြင့်ဆိပ်ကမ်းများမှပေးသောဘက်ထရီရလဒ်များကိုလည်းတွေ့နိုင်သည်။
ဤစမ်းသပ်မှုတွင် iPhone XS နှင့် iPhone XS Max တို့သည် HTC U12 + နှင့် LG G7 Thing Q တို့အထက်တွင်ရှိသည်။ သို့သော် Huawei P20 Pro၊ Pixel2XL၊ Note9OnePlus6အောက်တွင်ရှိသည်။ အမှန်မှာ၊ iPhone XS သည်ပျမ်းမျှအားဖြင့်အောက်ဘက်ထရီသက်တမ်းကိုပေးနိုင်သည်။
Terminal ကိုစဉ်ဆက်မပြတ်အသုံးပြုခြင်းဖြင့်ဤစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့သည် LTE ဆက်သွယ်မှုနှင့်တောက်ပမှု 150 nits။ iPhone ကိစ္စတွင် True Tone လုပ်ဆောင်မှုနှင့်အလိုအလျောက်တောက်ပမှုနှစ်မျိုးလုံးပိတ်ထားသည်။ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်လျှင် iPhone X သည် ၁၀ နာရီနှင့် ၄၉ မိနစ်၊ ၁၀ မိနစ်၊ ၁၁ မိနစ်သာ iPhone XS Max ထက်ရရှိသည်။ iPhone XS က ၉ နာရီနှင့် ၄၁ မိနစ်ရလဒ်များရရှိသည်။ ၄ င်းသည်ယခင်တစ်နာရီထက်နည်းသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အိုင်ဖုန်းသတင်း » iPhone ကို » အတော်ကြာ » အိုင်ဖုန်း X သည်ဘက်ထရီသက်တမ်းစမ်းသပ်မှုတွင် iPhone အသစ်များထက်သာလွန်သည်
ဟာသမဟုတ်ဘူး !!! ငါမက်စ်ကိုဝယ်ပြီး ၆၀% သောနေ့၌သူနှင့်အတူ XI သည် ၂၅ သို့မဟုတ် ၃၀% တွင်ကျန်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်သူတို့နှိုင်းယှဉ်မှုကိုမည်သို့ပြုမည်ကိုမသိပါ၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်ပြောပြီးပါပြီ ဒါကမဖြစ်နိုင်ဘူး။ ငါ Max ရဲ့ကြာချိန်ရှိတဲ့မည်သည့်ဖုန်းကိုမှမစမ်းသပ်ခဲ့ဘူး။ YouTube မှာလည်းသူတို့အသုံးပြုမှုကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်တဲ့အခါ၊ Max ကအရှည်ဆုံးအထိခံနိုင်ရည်ရှိတယ်။
ငါလုံးဝသဘောမတူဘူး, ငါ့ xs max ကြာရှည်ပေမယ့်အများကြီးပို, ငါဘက်ထရီသက်တမ်းစမ်းသပ်မှုနှင့်အတူ link တစ်ခုထားခဲ့ပါ။
iPhone XS / XS Max နှင့် Galaxy Note9နှင့် iPhone X ဘက်ထရီသက်တမ်းယိုယွင်းမှုစမ်းသပ်မှု
သတင်းအချက်အလက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ သတင်းအချက်အလက်ကိုကြည့်ရှုရန်လင့်ခ်သည်အဘယ်မှာရှိသနည်း။ ငါရှာနေတာငါရှာလို့မရဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲဒီလိုပြောစရာအကြောင်းမရှိဘဲပြောနေတာကဒါနဲ့တူတယ်။ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ပြောသလိုငါမြင်တဲ့စမ်းသပ်မှုအားလုံးကဆန့်ကျင်ဘက်ပဲ။ စာမျက်နှာပေါ်ထပ်မံလည်ပတ်ရန်သက်သက်လား။ အရာရာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါစေ
ဟုတ်ကဲ့, ဟုတ်ကဲ့ဆရာ link ကိုစွန့်ခွာ! ဒါကြောင့်ငါတို့ and တွေ့မြင်ခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်ပါတယ်
အသုံးပြုသူများကိုယ်တိုင်သက်သေအထောက်အထားများထက်သင်ဘာလိုချင်ပါသလဲ။ ငါဆိုသည်ကားငါ X ကနေ Xs Max သို့သွားပြီ၊ ဘက်ထရီကရက်စက်တယ်! ယနေ့နံနက် ၇း၃၀ မှညနေ ၂၃:၃၇ အထိတစ်နေ့လုံးသုံးပြီးနောက်တွင်ဘက်ထရီသည် ၆၃% ရှိပြီး X နှင့်အတူတူပင်အသုံးပြုပါကအများဆုံး ၃၀ သို့မဟုတ် ၃၅% အထိရှိသည်။ သူသည်ထိုစမ်းသပ်မှုများကိုမည်သို့ပြုလုပ်မည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ၊ သို့သော်နေ့စဉ်သုံးရာတွင်အရောင်မရှိပါ။
iPhone X နှင့် iPhone XS Max အကြားတွင်အမြန်နှုန်းစစ်ဆေးမှု
နောက်ဆုံးမှာတော့ Apple က Union of OK ပြီးလျှင် Shazam ကို ၀ ယ်လိုက်သည်